ငဟစ်ငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ငဟစ်ငှက် သည် ပါဏဗေဒ အလိုအရ 'အာဒီဒေး' မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်သောငှက်ဖြစ်သည်။ ငဟစ်အမျိုးမျိုးရှိသည့် အနက် ထင်ရှားသော ၂ မျိုးမှာ 'အာဒီဆီနာရီရက်တီရော့စထြစ်'နှင့် 'အာဒီပါပြူရီမယ်နီလန်ဆစ်'တို့ ဖြစ်ကြ၏။ ငဟစ်၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် သေးသွယ်ရှည်လျားလေသည်။ ဖြောင့်စင်းသောနှုတ်သီးနှင့် ရှည်လျားသော ခြေတံရှိသောကြောင့် ဥဗျိုင်းနှင့်တူသည်။ အလျား ၃၈ လက်မခန့်ရှိသည်။ လည်တိုင်တွင် အမည်းပြောက်အစင်းကြောင်းများ ပါရှိသည်။ ဦးခေါင်းနှင့် လည်တိုင်မှာ သံချေးရောင်ကဲ့သို့ နီယောင်ယောင် ရှိသည်။ ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ မည်းနက်၍ သစ်ကြားခွံရောင် ရှိသည်။ ငဟစ်အမနှင့် အထီးတို့၏ အရောင်အဆင်းမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ငဟစ်သည် ကျူတော၊ ကိုင်းတောများ ပေါက်ရောက်သည့် မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ ကမ်းပါးများတွင် ကျက်စားလေ့ ရှိသည်။ ပျံကာစနှင့် ပျံသန်းနေစဉ်တွင် ကျယ်လောင်စူးရှစွာ အော်မြည်တတ်သည်။ ပျံမည်ပြုသောအခါ လည်တိုင်ကို ရှေ့သို့ ဆန့်၍ အတောင်ကို တစ်အားခတ်ကာ တွဲလွဲကျ နေသောကြောင့် ခြေတံရှည်တို့ဖြင့် ကိုယ်ကိုထိန်း၍ ပျံတက် သွားတတ်သည်။ ထိုကြောင့် ပျံကာစတွင် ငဟစ်ကို တွေ့ရသည်မှာ ပြေပြစ်ခြင်း မရှိလှပေ။ အရှိန်ရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ခြေတံများကို အမြီးအောက်သို့ ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဦးခေါင်းကိုလည်း ပခုံးနှစ်ဘက်ကြားသို့ ရောက်အောင်လည်တိုင်ကို ကွေးထားတတ်သည်။ ငါးများ၊ ဖားများကို အများအားဖြင့် စားသောက်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ရေတွင်နေတတ်သော အင်းဆက်ပိုးကောင်များ၊ ခရုမျိုး၊ ဗုဇွန်ကနန်းမျိုးများကိုလည်း စားသောက်လေ့ရှိလေသည်။
မိုးရာသီတွင် ငဟစ်ငယ်များ ဥမှ ပေါက်ကြသည်။ သာမန်အားဖြင့် ငဟစ်တို့သည် တစ်ကောင်တည်း နေလေ့ရှိကြသော်လည်း ရွှေဘိုနယ်၌တွေ့ရသော ငဟစ်တို့မှာ အုပ်ဖွဲ့၍ နေတတ်ကြသည်။ အသိုက်ကို ကျူပင်များပေါ်၌၎င်း၊ သစ်ပင်များပေါ် ၌၎င်း၊ တုတ်ချောင်းများဖြင့် ပြုလုပ်သည်။ အသိုက်၏ အချင်းမှာ တစ်ပေခန့်ရှိ၍ စောက် ၈ လက်မခန့်ရှိသည်။ တစ်မြုံလျှင် ဥ ၃ လုံးမှ ၅ လုံးအထိ ရှိ၏။ ဥအရောင်မှာ အစိမ်းနု ဖြစ်သည်။
ငဟစ်ကို အာဖရိကတိုက်၊ ဥရောပတိုက် တောင်ပိုင်းနှင့် အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သီဟိုဠ်ကျွန်းတို့တွင် ငဟစ်ကို တွေ့ရသည်။
A. p. manilensis, illustration by Keulemans, 1898
In habitat at Sultanpur National Park, District Gurgaon, Haryana, India
Immature at Bharatpur, Rajasthan, India
waiting for prey near Hodal, Faridabad, Haryana, India
Fishing at Sulur lake Coimbatore, Tamil Nadu, India
↑ BirdLife International (2016). "Ardea purpurea". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. old-form url doi: 10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22697031A86466990.en
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငဟစ်ငှက်&oldid=711438" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။